Fantaro izay lazain'ny mpanjifa momba anao
Ivotoerana momba ny mpanjifa Lithium: Avy amin'ny mpanjifa ka hatramin'ny Superfans
Alakamisy, Jolay 26, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Ao amin'ny tontolon'ny sosialy-centric ankehitriny, izay lazain'ny mpanjifa momba ny marika dia miteraka hery misimisy kokoa mihoatra ny doka rehetra na atiny voaloa. Tsy mahagaga raha manentsin-tadiny ny mpivarotra mba hanandrana sy hahatakatra izay lazain'ny mpanjifa momba ny marika amin'ny sehatra sosialy. LithiumNy vahaolana amin'ny fanaraha-maso ny media sosialy amin'ny fotoana marina dia ahafahan'ny mpivarotra mihaino, mandrefy ary manara-maso ny feon'ny mpanjifa.
Ivotoerana momba ny mpanjifa Lithium manome anao fitaovana handinihana ny asa sosialy sy hamoronana fifandraisan'ny mpanjifa lalindalina kokoa manerana ny Lithium Communities, Facebook, Twitter, ary tranonkala an-tapitrisany manerana ny tranonkala sosialy. Natambatra ny fiarahamonina Analytics, media sosialy Analytics, ary ny fidirana amin'ny haino aman-jery sosialy ho lasa tambajotra tokana sy mirindra mba hahamora kokoa ny fivezivezena amin'ny fomba fiasa.
Eo afovoan'ny vahaolana amin'ny fanaraha-maso ny media sosialy an'i Lithium dia dashboard. Rehefa mamorona fikarohana amin'ny alàlan'ny anarana marika na teny fanalahidy hafa ny mpampiasa, dia mametaka ireo tambajotran-tserasera sosialy isan-karazany i Lithium ary mametraka ny dashboard miaraka amin'ny lisitr'ireo lahatsoratra na teny nalaina nahitana ny teny lakile. Ny dashboard dia manome sary izay mihatra ihany koa Analytics amin'ny valiny. Ilay moteur dia mizaka ny angon-drakitra tena izy sy ny angona manan-tantara ary mandrakotra bilaogy mihoatra ny 100 tapitrisa, tranokala fizarana sary sy horonan-tsary, tranokalam-baovao mahazatra ary seha-forum ankoatr'ireo tranonkala media sosialy malaza toy ny Facebook sy Twitter.
Avy amin'ny angona fikarohana, ny motera Lithium dia mamoaka teny toa faniriana, te, tia, ary Halan'i hanara-maso ny fahatsapana ho azy. Ny mpivarotra dia afaka mampihatra asan'ny override maha-olombelona mba handinihana tsara ny fanaraha-maso ny fahatsapana toy izany. Misy ihany koa ny fomba fijerin'ny influencer izay ahafahan'ny mpampiasa mamantatra ireo mpankafy sy mpanaraka izay manana ny fitaomana lehibe indrindra eo amin'ny fiaraha-monina, mamela anao hahalala hoe iza ny mpanjifa ary inona no mety ho vokany rehefa mamaha ny olana ianao na manome hevitra momba ny valiny amin'ny fomba hankasitraka sy hampiely ny vaovao izy ireo.
Na dia ny fahitana kely fotsiny aza amin'ny dashboard dia ahafahan'ny mpivarotra mahatakatra ny fahatsapan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. Ny fandinihana amin'ny an-tsipiriany dia ahafahan'ny mpivarotra tsy manao fitsabahana araka ny tokony ho izy mba hampifandray tsara kokoa ny mpanjifa sy hitazomana ny lazany fa hamahana ihany koa ny olana misy eo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Ohatra, ny fihetseham-po ratsy avy amin'ny faritra jeografika iray manokana dia mety ho ny fitadiavana fanahy, izay mety hanaraka ny olana amin'ny tsy fahaterahana!
Amin'ny fampiasana ny fahalalan'ny mpanjifa Lithium, azonao atao:
Hatsarao ny fahombiazan'ny programa sosialy: Ampitomboy ny haavon'ny fifandraisan'ny peerto-peer ary alao antoka fa ny loharanon-karena tsara indrindra dia mamaly mivantana ireo lahatsoratry ny media sosialy
Fantaro ary kolokoloy ny mpanentana: Amboary ho mpankafy ny mpankafy izay manao ho fanitarana ny ekipa marketing, varotra anao ary mpanohana anao
Tongava ivon'ny fahitana ara-tsosialy: Tohizo ny rantsan-tànanao amin'ny fakan'ny lohahevitra mafana, ny fahatsapana ny marika, ary ny hetsika ataon'ny mpifaninana
Ny fampiasana ny Lithium dia mihoatra ny fanaraha-maso ara-tsosialy. Ny fanomezana sakafo amin'ny marika mpifaninana ho toy ny teny lakile dia ahafahan'ny mpivarotra mahatakatra ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny vondrom-piarahamonina ankapobeny amin'ireo mpifaninana aminao! Na dia tsy manapa-kevitra ny hampiasa ny sehatra misy azy aza ianao dia aza hadino ny mijery azy ireo loharano tsy mampino ao amin'ny media sosialy, fitaomana, faharanitan-tsain'ny mpanjifa, sns.
Ny Gold Rush ho an'ny sehatra avo lenta
Ny kanton'ny fizahana finday